Hay’ada Kaalo oo tababar u furtay laamaha garsoorka, booliska iyo xeer ilaalinta Degmada Qardho. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Hay’ada Kaalo oo tababar u furtay laamaha garsoorka, booliska iyo xeer ilaalinta Degmada Qardho.
Hay’ada Kaalo oo tababar u furtay laamaha garsoorka, booliska iyo xeer ilaalinta Degmada Qardho.
Hay’ada Kaalo ayaa Magaalada Qardho tababar ugu qabatay 30 qof oo isugu jira booliska, garsoorka iyo xeer-ilaalinta degmada Qardho, dadkaan ayaa lagu tababarayay kor u qaadista ilaalinta xaquuqda dadka eedaysanayaasha ah gaar ahaan dadka qaxootiga ah ee ku sugan degmada Qardho.
Farax Xidig Madaxa Arimaha Bulshada Degmada Qardho oo ugu horayn goobta ka hadlay waxa uu sheegayn in casharadaan ay yihiin kuwa muhiim gaar ah u leh ciidamada booliska, Garsoorka iyo Xeer-ilaalinta, waxa uu kula dardaarmey in ay ka faaidaystaan.
Cabdijaliil Saciid madaxa Hay’ado Kaalo Gobolka Karkaar waxa uu sheegay in ay muhiimad gaar ah siinayaan ilaalinta iyo dhawrista xuquuqda dadka magan galyo doonka ah, waxa uu tilmaamey in horay ay u qabteen tababaro kala duwan oo ku salaysan ilaalinta xaquuqda qaxootiga iyo dadka eedaysanyaasha ah, Ciidamadana ay ka rajaynayaan in in ay ku dhaqmaan casharada la barayo.